Sheekooyin – IFIYE
Qaybinta Shaqaalaha waa kala-saaridda hawlaha nidaam kasta si markaa ka qaybgalayaashu ay khabiir u noqdaan. Shakhsiyaadka, Ururrada, iyo Qaramada ayaa ku guuleysta oo helaya karti gaar ah iyo qaab isku-dhafan si ay uga faa’iidaystaan ​​awooda dadka kale marka laga reebo midda iyaga u gaar ah. Awoodda khaaska ah waxaa ku jiri kara qalab ama khayraad […]
Mar haddaanad geerida horteed geesiga aqoonsan Goblan weeye Soomaaliyeey garashadaadiiye.” Eebbe ha u naxariistii abwaan Cali Sugulle “Duncarbeed” oo maanta ku geeriyooday waddanka Imaaraatka Carabta, waxa uu ahaa abwaan, hal-abuur, riwaayad sameeya iyo suugaan-dhaadhi aad loogu xasuusan doono halgankii xorriyad doonka, curinta iyo casriyeynta riwaayadaha, u tirinta nuucyada kala duwan ee maansada jaad gooni ah […]
Runtii waa qof cajiib ah, maalinba maalinta ka dambeysa waxaan u qaadaa dareen iyo jacayl hor leh. Ka ma walwalo arrin ay gacanta ku hayso, waayo waxaan dareemaa in ay tahay masuul kan ugu wayn, kalsoonida ugu wayn waxay i gashaa markaan arko dhaldhalaalka labadeenna carruur iyo habka ay u daryeesho. Waa qof uu Alle […]
Geeda-Beerihii Dabiiciga Ahaa (Sakariye Cabdixaliim)
Baaskiil [Rikshaw] kaxeeye degan degmada Faridpur, waa tusaale dhiirigalin leh ah, maxaa yeelay waxa uu maalin kasta beeraa hal geed afartan iyo sideedii sano ee la soo dhaafay. Rikshaw waa baaskiil sida Bajaajta oo kale dadku ay u raacaan. Waa Cabdul Samad Sheekh oo ah lixdan jir degan degmada Faridpur ee ka tirsan caasimadda wadanka […]
Suudaaniyaddii soo luntay! (W/Q Maxamed Cabdullahi Dhaaley)
Waxa ay isweyddiinaysaa haddii ay caawa ku laabato gurigeeda sida uu noqon doono dareenka qoyskeeda. Waxa ay hubtaa in ay ilmaheedi goorahaanba ka walwalsan yihiin xaalka ay iyadu ku sugan tahay. Iyada iyo allaheeda mooyee, cid kale oo geeri iyo nolol wax ay ku sugan tahay og ma jirto. Sidaas oo ay tahayna, wixii ay […]